သင်က Tadalafil အကြောင်းသိထားသင့်အရာအားလုံးကို - Buyaas
သြဂုတ်လ 29, 2019
1. Tadalafil အမှုန့်ဆိုတာဘာလဲ?
Tadalafil အမှုန့် (171596-29-5) ထိုသို့သောတက်ဘလက်များနှင့်အမှုန့်အဖြစ်ကွဲပြားခြားနားသောပါးစပ်ပုံစံများအတွက်ရရှိနိုင်သောဆေးညွှန်းဆေးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာမူးယစ်ဆေး Adcirca နဲ့ Cialis နှင့်တူကွဲပြားခြားနားသောအမှတ်တံဆိပ်အမည်များကိုအောက်မှာစျေးကွက်အပေါ်ရရှိနိုင်ပါသည်။ ဒါ့အပြင် tadalafil က၎င်း၏ယေဘုယျ form မှာတည်ရှိပြီးဖြစ်သည်။ သို့သျောလညျးသငျသညျကအားလုံးကိုမူရင်းမူးယစ်ဆေးရဲ့အားသာချက်ကင်းမဲ့စေခြင်းငှါ, အဖြစ်ယေဘုယျ tadalafil အမှုန့်ကိုသုံးပါရန်အကြံပြုကြသည်မဟုတ်, အရှင်, သင် tadalafil နဲ့တူဒီဆေးဝါးဝယ်ယူသည့်အခါအလွန်သတိထားပါရန်လိုအပ်သည်။ သငျသညျပိုကောင်းရလဒ်အတွက်ညာဘက် tadalafil ပုံစံကိုဝယ်ကြောင်းအာမခံပါသည်။ သင်၏ဆရာဝန်ကိုဘယ်လိုအဘယ်မှာရညျအသှေး Tadalafil အမှုန့်ကိုဝယ်ခြင်းငှါပေါ်တွင်သင်ပဲ့ပြင်ပါလိမ့်မယ်.
Tadalafil (171596-29-5) အမျိုးမျိုးသောကျန်းမာရေးအခြေအနေများဆက်ဆံဖို့ကွဲပြားခြားနားသောအမှတ်တံဆိပ်အမည်များကိုအောက်တွင်အသုံးပြုသည်။ ဥပမာ, Cialis အများအားဖြင့်သာမန်ကာကျယ်ဝန်းဆီးကျိတ်အဖြစ်ရည်ညွှန်းသည်အမျိုးသားများတွင် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုသို့မဟုတ်ခွန်အားမရှိခြင်း၏ကုသမှုအဖြစ်ညင်သာပျော့ပျောင်းဆီးကျိတ် hypertrophy အတွက်အသုံးပြုသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, အရာကိုလည်းအခြား tadalafil အမှတ်တံဆိပ် Adcirca, အဆုတ်သွေးလွှတ်ကြောသွေးတိုးရောဂါ၏ကုသမှုအတွက်အသုံးပြုသည်။ Adcirca လည်းအဆုတ်သွေးလွှတ်ကြောသွေးတိုးရောဂါခံစားနေရပြီးနှစ်ဦးစလုံးယောက်ျားမိန်းမတို့အတွက်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်နိုင်စွမ်းတိုးတက်စေရန်အသုံးပြုသည်။
ဒါဟာပြင်းထန်တဲ့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေကြုံနေရကိုရှောင်ရှားရန်သင့်ဆရာဝန်၏လမ်းညွှန်မှုအောက်တွင်ဒီမူးယစ်ဆေးကိုယူဖို့အမြဲအကြံပြုလိုတယ်ပါပဲ။ အဘယ်သူမျှမကိစ္စသင်အလွယ်တကူ tadalafil အမှုန့်ကိုရယူနိုငျပုံကိုတစ်ဦးဆေးစစ်ခံယူခြင်းမရှိဘဲယူကြဘူး။ မူးယစ်ဆေးသင်၏အဆွေခင်ပွန်းများအတွက်အလုပ်လုပ်နေခဲ့ပြီးဘာလို့လဲဆိုတော့ကြောင့်သင်တို့အပေါ်မှာအရည်အသွေးကိုရလဒ်များကိုကယ်နှုတ်တော်မူလိမ့်မည်ဟုအော်တိုမဟုတ်ပါဘူး။ လူ့ကိုယ်ခန္ဓာသည်ကွဲပြားခြားနားသောဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, သင်၏ဆရာဝန်သင်၏ကျန်းမာရေးအခွအေနေဆန်းစစ်ပြီးနောက်သင်တို့အဘို့အညာဘက်ကိုသောက်သုံးသောဆုံးဖြတ်သင့်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပါပဲ။ အလွဲသုံးစားသို့မဟုတ် overdosed အခါ, tadalafil reverse မှအကုန်အကျများနှင့်တစ်ခါတစ်ရံလုံးဝနောက်ကြောင်းပြန်မလှည်ဖြစ်နိုင်သည်ကိုပြင်းထန်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်။
2.ဘယ်လို Tadalafil အမှုန့်အလုပ်လုပ်ပါသလဲ
Tadalafil အမှုန့် phosphodiesterase type ကို5inhibitors (PDE5) အဖြစ်လူသိများမူးယစ်ဆေးဝါးများတစ်လူတန်းစားပိုင်သောဆေးဝါးများကြားတွင်ဖြစ်ပါသည်။ အားလုံးဤအတန်းအစားအလုပ်အတွက်မူးယစ်ဆေးအတူတူထုံးစံ၌နီးပါးဆင်တူကျန်းမာရေးအခြေအနေများဆက်ဆံဖို့အကြံအဥာဏ်များကအသုံးပြုကြသည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်, မူးယစ်ဆေးဝါးအတန်းကိုခေါ်ရသောကွဲပြားခြားနားသောအုပ်စုများအတွင်းခွဲခြားထားပါသည်။ အဆိုပါအုပ်စုများအလားတူဂုဏ်သတ္တိများနှင့်အတူတူပင်လမ်းအတွက်ကြောင့်အလုပ်နှင့်အတူမူးယစ်ဆေးဝါးပါဝင်သည်။ Tadalafil ပါဝင်သည်ကြောင်းကိုသင်၏ညင်သာပျော့ပျောင်းဆီးကျိတ် hyperplasia (BPH) ရောဂါလက္ခဏာတွေပိုကောင်းစေပါတယ်သောဆီးအိမ်နှင့်ဆီးကျိတ်ကြွက်သားအပန်းဖြေအတွက်ကူညီပေးသည်; ဝဒေနာ, ဒုက္ခဆီးသွားခြင်းများနှင့်ဆီးဖို့အရေးတကြီးသို့မဟုတ်ပုံမှန်လိုအပ်နေဆီးနေစဉ်။
ဒါဟာမူးယစ်ဆေးလည်းအလှည့်တစ်ခုစိုက်ထူရတဲ့နှင့်စောင့်ရှောက်ခြင်းအတွက်ကူညီပေးသည်ဖြစ်သောလိင်တံ, ရန်သင့်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့သွေးစီးဆင်းမှုတိုးပွားစေပါသည်။ Tadalafil အများအားဖြင့်ယောက်ျားအတွက် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု၏ကုသမှုများအတွက်အသုံးပြုသည်, သင်မူကားလိင်နှိုးဆွရတစ်ချိန်ကသာသင်ကူညီပေးသည်။ လိင်တံအသွေးတော်နှင့်ပြည့်စုံလျက်ရှိရရှိသည့်အခါပြစ်မှုဆိုင်ရာစိုက်ထူရာအရပ်ကိုကြာပါသည်။ အဆိုပါစိုက်ထူထောက်ပံ့ရေးအသွေးတော် dilate တာဝန်ရှိသည်သွေးကြောပြီးနောက်ဖြစ်ပျက်နှင့်ထိုလိင်တံစာချုပ်ထဲကနေအသှေးကိုဖယ်ရှားခြင်းနှင့်အတူတာဝန်ပေးဆောင်ရွက်နေချိန်တွင်ထိုအသွေးထောက်ပံ့ရေးမြှင့်တင်ရန်။ ထိုအသွေးသည်သင်၏လိင်တံအတွင်းစုဆောင်းသောအခါ, တစ်ခုစိုက်ထူကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ လေ့လာရေး tadalafil erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုရှိသည်သောယောက်ျားတစ်ဦးအများစုအဘို့အခက်ခဲများနှင့်ရေရှည်တည်တံ့သည့်စိုက်ထူမှီနိုင်စွမ်းပိုကောင်းစေပါတယ်ပြသခဲ့ကြသည်။
အဆိုပါ PAH အဘို့, ဒီမူးယစ်ဆေးဝါးအလှည့်အတွက်လေ့ကျင့်ခန်းရန်သင့်ခြုံငုံနိုင်စွမ်းတိုးတက်ကောင်းမွန်သောသွေးစီးဆင်းမှု, တိုးမြှင့်ဖို့သင့်ရဲ့အဆုတ်ထဲမှာသင့်ရဲ့သွေးကြောပြေစေပြီး။ ဒီမူးယစ်ဆေးကိုယူပြီးတဲ့အခါမှာ, သင်, ဒါကြောင့်, ရှည်လျားနာရီထွက်အလုပ်လုပ်နှင့်တတ်နိုင်သမျှအတိုဆုံးအချိန်အတွင်းမှာသင့်ရဲ့ပန်းတိုင်များကိုအောင်မြင်ရန်ဖို့လုံလောက်တဲ့အစွမ်းသတ္တိကိုရပါလိမ့်မယ်။
သင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုအတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုထိတွေ့ဆက်ဆံမီ tadalafil အမှုန့်ကိုအနည်းဆုံး 30 မိနစ်ကိုယူသင့်ကြောင်း Medical '' အကွံဉာဏျ။ သင်နှင့်အတူသို့မဟုတ်အစားအစာမရှိဘဲယူသောအခါမူးယစ်ဆေးအသုံးဝင်သောဖြစ်လိမ့်မည်။ သငျသညျလိင်ဆက်ဆံချင်တဲ့အခါမှသာသင်သာ tadalafil ယူသင့်ပါတယ်။ သို့သော်တစ်ပါတ်အတွက်အလိုအလျောက်လိင်ထက်ပိုသုံးကြိမ်သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုရှိသည်ဖို့ကိုချစ်မညျ့သူယောက်ျားအဘို့, ထို့နောက်သူတို့နှစ်ဦးကိုဆေးများ, 2.5mg နှင့် 5mg လာရသောနေ့စဉ်သောက်သုံးသော, အဘို့အသွားနိုင်ပါတယ်။ တစ်နေ့လျှင်အဆိုပါအကြံပြုသောက်သုံးသော 10mg ဖြစ်ပါသည်, သို့သော်သင်တို့အဘို့အလုံလောက်မယ့်အခါ, ထို့နောက်သင့်ဆေးမှူးတ 20mg ဖို့သောက်သုံးသောတိုးမြှင့်ပေးနိုင်သည်။ သငျသညျအဆင့်မြင့် tadalafil အမှုန့်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေကိုရှောင်ရှားဖို့သောက်သုံးသောကိုပြောင်းလဲမတိုင်မီသို့သော်သင်၏ဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်ပါ။
Tadalafil သာတစ်ကြိမ် 24 နာရီကိုယူရပါမည်။ သင်မျှော်လင့်ထားသည့်စိုက်ထူမရကြဘူးသောအခါ, ထိုနေ့အတွင်းအခြားသောက်သုံးသော add ကြပါဘူး။ ဒါဟာတပ်မက်လိုချင်သောရလဒ်များကိုရတဲ့အတွက်နှောင့်နှေးတွေ့ကြုံခံစားဖို့ပထမဦးဆုံးအချိန် tadalafil အသုံးပြုသူများအတွက်အလွန်ဘုံပါပဲ။ အစောပိုင်းကဒီဆောင်းပါးမှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းလူ့အလောင်းတွေကွဲပြားခြားနားကြသည်။ အခြားသူတွေကိုသူတို့နှောင့်နှေးတွေ့ကြုံခံစားနေချိန်မှာတချို့လူတွေက 30 မိနစ်ကြာချိန်အတွင်းမှာ tadalafil အမှုန့်ရလဒ်တွေကိုတွေ့ကြုံခံစားပေလိမ့်မည်။ သို့သော်ဆရာဝန်တွေသင်တစ်ဦးပိုမိုမြင့်မားသောက်သုံးသောသို့မဟုတ်တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားကုသမှု option ကိုသွားကြဖို့ဆုံးဖြတ်မီအကြောင်းကိုရှစ်ရက်မြောက်သောနေ့၌အဘို့မူးယစ်ဆေးရဲ့သောက်သုံးသောယူကြောင်းအကြံပြုပါသည်။
သငျသညျမဆိုအခြား erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုမူးယစ်ဆေးသို့မဟုတ်လိမ်းဆေးနှင့်အတူ tadalafil အမှုန့်ကိုယူဘယ်တော့မှသငျ့သညျ။ သင်သည်သင်၏ tadalafil သောက်သုံးသော start ရှေ့တော်၌ကိုယ်ကိုအခြား ED ဆေးကိုယူပြီးလျှင်ထိုကွောငျ့, သင့်ဆရာဝန်အကြောင်းကြား။ ထိုကဲ့သို့သော sildenafil, Viagra, Spedra နှင့် Cialis အဖြစ်ဈေးကွက်တွင်အမျိုးမျိုးသော tadalafil အခြားနည်းလမ်းရှိပေမယ့်, သင် tadalafil သူတို့နှင့်အတူမဆိုတာအန္တာရာယ်မပေးသင့်သည်, ဒါဟာပြင်းထန်တဲ့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်။ တစ်ကြိမ်ပေမယ့်သင့်ရဲ့ဆရာဝန်၏အကြံပေးချက်ကိုအောက်မှာတစ်ဦးတည်းသာယူပါ။ သငျသညျထိုကဲ့သို့သော isosorbide dinitrate, nitroglycerin, isosorbide mononitrate နှင့်င့်ဖောက်သည့်တူသောအပန်းဖြေမူးယစ်ဆေးအဖြစ်နှလုံးပြဿနာများသို့မဟုတ်ရင်ဘတ်ဝေဒနာဆကျဆံဖို့မဆိုနိုက်ထရိတ်မူးယစ်ဆေးယူပြီးလျှင်အပြင်, သင်တို့လည်းဝေးနေရန်အကြံပြု tadalafil အမှုန့်ယူပြီး။ မည်သည့်နိုက်ထရိတ်မူးယစ်ဆေးနှင့်အတူ tadalafil ပေါင်းစပ်ပြီးသွေးဖိအားအတွက်အလေးအနက်ကျဆင်းခြင်းဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြပေးနိုင်သည်။
လုံခြုံဘက်မှာဖြစ်စေရန်, သငျသညျကိုယူပြီးနေကြသည်အားလုံးဆေးဝါးများနှင့် ပတ်သက်. သို့မဟုတ်သင် tadalafil ယူပြီးမစတင်မီသင်သည်မည်သည့်ကုသမှုအောက်မှာလျှင်သင့်ဆရာဝန်အကြောင်းကြား။ အမှု၌သင်တို့ကိုနာကျင်စိုက်ထူတွေ့ကြုံခံစားဒါမှမဟုတ်စိုက်ထူ4နာရီကိုလည်းချက်ချင်းသင်၏ဆေးဝါးအကြောင်းကြားထက်ပိုရှည်ယူပါ။ အချိန်ကြာမြင့်စွာစိုက်ထူသင့်ရဲ့လိင်တံကကြွက်သားတွေကိုပျက်စီးစေနိုင်ပါတယ်။ သငျသညျ tadalafil မှမတည့်လျှင်ဒါ့အပြင်တစ်ခုကိုယူပြီးအန္တာရာယ်နှင့်သင်တစ်ဦးပိုလုံခြုံအခြားရွေးချယ်စရာရရန်သင့်ဆရာဝန်ကိုသိပါစေပါဘူး။ Tadalafil erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုအတွက်အလွန်အစွမ်းထက်မူးယစ်ဖြစ်ပါသည်, သို့သော်အဆင့်မြင့်ဆိုးကျိုးများမှရှောင်ရှားရန်စောင့်ရှောက်မှုတွေအများကြီးနှင့်အတူခေါ်ဆောင်သွားရပါမည်။ ပိုကောင်းတဲ့ရလဒ်တွေကိုများအတွက်သတ်မှတ်ဆေးများမှကပ်ထားပါ။
ပုံမှန်အားဖြင့်, tadalafil အမှုန့်ကဲ့သို့သောခွန်အားမရှိခြင်းနှင့် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုအဖြစ်အထီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ function ကိုပြဿနာများ၏ကုသမှုကိုအသုံးပြုသည်။ အပြင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးဆွတိုးမြှင့်ခြင်းမှ, tadalafil လည်းလူကိုပိုရှည်ဘို့ခဲယဉ်းစိုက်ထူရရေရှည်တည်တံ့ကူညီရန်လိင်တံသို့သွေးစီးဆင်းမှုပိုမိုကောင်းမွန်စေတယ်။ ဒါဟာမူးယစ်ဆေးတစ်ခုကြာရှည်လိင်အတွေ့အကြုံကိုရှိခြင်းအတွက်ယောက်ျားကူညီမှုအတွက်လူသိများသည်။ Tadalafil အသုံးပြုသူများအခက်ခဲများနှင့်ကြာကြာစိုက်ထူပျော်မွေ့။ သို့သော်မူးယစ်ဆေးဝါးလိင်မတိုင်မီသာတစ်ချိန်ကနေ့နှင့် 30 မိနစ်နှုန်းကိုယူရပါမည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်, tadalafil အမှုန့်ကိုလည်းညင်သာပျော့ပျောင်းဆီးကျိတ် hyperplasia (BPH) ရောဂါလက္ခဏာများ၏ကုသမှုအတွက်အသုံးပြုသည်။ အဆိုပါမူးယစ်ဆေးအထူးသဖြင့်ညဥ့်အလယ်၌, ဆီးကြိတ်ကြီးခြင်းရဲ့ထိုကဲ့သို့သောအားနည်းစီးအဖြစ်လက္ခဏာတွေ, ဆီးစီးဆင်းမှု စတင်. အတွက်အခက်အခဲများနှင့်မကြာခဏဆီးသက်သာ။ ဤတွင် tadalafil ချောဆီးအိမ်နှင့်ဆီးကျိတ်ကြွက်သားလျှော့ပေါ့အားဖြင့်သင်တို့ကိုကူညီပေးသည်။ သို့သော်သင်ကဆေးစစ်ခံယူမတိုင်မီသင်ဆီးကြိတ်ကြီးခြင်းရဲ့ရောဂါလက္ခဏာတွေကိုခံစားလျှင်ပင်ဝယ်ယူရန်နှင့် tadalafil အမှုန့်ကိုစတင်သုံးစွဲကြပါဘူး။ မူးယစ်ဆေးကိုသတိရပါတဲ့ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပရော်ဖက်ရှင်နယ်လူအပေါင်းတို့သည်အချိန်အားဖြင့်သတ်မှတ်ထားသည့်ရပါမည်။
ဆရာဝန်လည်းအဆုတ်သွေးလွှတ်ကြောသွေးတိုးရောဂါ (PAH) နဲ့တဦးချင်းစီမှ tadalafil အမှုန့်ပြဌာန်းထားပြီးဖြစ်ပါသည်။ ဒီအမြင့်မားတဲ့သွေးဖိအားအဆုတ်သွေးသယ်ဆောင်သင့်ရေယာဉ်များအတွက်လည်းမရှိတဲ့အခွအေနေဖြစ်ပြီး, အတိုလေးတွေနှင့်မောပန်းခြင်းအသက်ရှူခြင်း, မူးဝြေခင်းစေပါတယ်။ ဒီအခွအေနေခံစားနေရပြီးလူအတော်များများက hard ပုံမှန်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ဖို့ကိုရှာပါ။ သို့သျောလညျးသတငျးကောငျး tadalafil အမှုန့်ကိုခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာအခြေအနေကိုသက်ရောက်မှုကိုလျှော့ချခြင်းဖြင့်အငြိမ့်ကသူတို့အလုပ်ထွက်လုပ်ဖို့ PAH လူနာကူညီပေးနေအတွက်မရှိမဖြစ်အခန်းကဏ္ဍဖြစ်ပါတယ်။
သို့သော် tadalafil အခြားသူတွေအကြားအသည်းရောင်, HIV ရောဂါ, ဆစ်ဖလစ်နှင့် gonorrhea, ပါဝင်သည်ထားတဲ့လိင်မှတဆင့်ကူးစက်သောရောဂါများ, ဆန့်ကျင်သငျသညျကာကွယ်ပေးလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ အားလုံးအားလုံးအတွက်, သင်ကဘေးကင်းလုံခြုံခြင်းနှင့်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်လိင်တိုင်းအချိန်ရှိသည်သေချာပါစေ။ ကိစ္စတွင်သင်စေးကွန်ဒုံးကိုသုံးနိုင်သည်, လိင်စဉ်အတွင်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ဘယ်လိုအကြောင်းသေချာမသိကြ။ ပိုမိုသိရှိလိုပါက, သင့်ဆေးဝါးသို့မဟုတ်ဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်ပါ။
Tadalafil သောက်သုံးသောယင်း၏အသုံးပြုမှုများအတွက်အကြောင်းပြချက်ပေါ် မူတည်. , တယောက်ကိုတယောက်အသုံးပြုသူများထံမှကွဲပြားပေလိမ့်မည်။ သင်၏ကျန်းမာရေးအခြေအနေနှင့်မည်ကဲ့သို့သင့်ခန္ဓာကိုယ်မူးယစ်ဆေးတုံ့ပြန်မှုကိုလည်းသင်၏အသောက်သုံးသောသြဇာလွှမ်းမိုးမည်ဖြစ်သည်။ သို့ရာတွင်ထိုသို့သင်ဆေးဝါးတိုးတက်မှုကိုအကဲဖြတ်ပြီးနောက်သင်၏ဆရာဝန်အားဖြင့်နောက်ပိုင်းတွင်တိုးလာနိုင်ပါသည်သောအနိမ့်အကြံပြုသောက်သုံးသောနှင့်အတူစတင်အမြဲအကြံပြုလိုတယ်ပါပဲ။ ဒါဟာပြင်းထန်တဲ့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြဒါမှမဟုတ်မျှော်မှန်းရလဒ်ကယ်နှုတ်တော်မူရန်ပျက်ကွက်မယ်အဖြစ်သင့်ဆေးမှူးတအသိပေးမရှိဘဲသောက်သုံးသောညှိဘယ်တော့မှမ။ Tadalafil အမှုန့်ဆေးညွှန်း အောက်ပါအတိုင်းကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏;
အရွယ်ရောက်ပြီးသူ Erectile အလုပ်မဖြစ်သောက်သုံးသော
ဤသည် tadalafil အမှုန့်သောက်သုံးသောခက်ခဲစိုက်ထူရတဲ့နှင့်တည်တံ့ခိုင်မြဲအတွက်အခက်အခဲများနှင့်အတူအထီးအဘို့ဖန်ဆင်းတော်မူ၏ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါအကြံပြုကနဦးသောက်သုံးသောလိင်လှုပ်ရှားမှုသို့ရတဲ့မတိုင်မီနှုတ်တစ်ကြိမ်တစ်ရက်သို့မဟုတ် 10 မိနစ်နှုန်းကိုယူသင့်ကြောင်း 30mg ဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျအကြိုးရလဒျကိုတွေ့ကြုံခံစားကြဘူးလျှင်, သင်အထိရှစ်ရက်မြောက်သောနေ့၌အဘို့သင့်ကိုပုံမှန်အတိုင်းသောက်သုံးသောယူပြီးဆက်လက်သင့်ပါတယ်, ထို့နောက်ဆေးထိုးချိန်ညှိရန်သင့်ဆရာဝန်သွားရောက်ကြည့်ရှု။ အချို့လူများကရလဒ်များရတဲ့အတွက်နှောင့်နှေး, အထူးသဖြင့်ပထမဦးဆုံးအကြိမ် tadalafil အသုံးပြုသူများကိုခံစားရသည်။ သို့သော်သောက်သုံးသောတစ်နေ့လျှင် 20mg မှတိုးမြှင့်စေနိုင်သည်။ tadalafil အမှုန့်သောက်သုံးသောများ၏ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု5ထံမှလိုအပ်အဖြစ်တစ်နေ့လျှင်တစ်ကြိမ်သာယူသင့်ကြောင်း 20mgs ဖို့ဒါမှမဟုတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုမတိုင်မီနေကြပါတယ်။ ED သောက်သုံးသောအဘို့အ Tadalafil တစ်ဦးချင်းသည်းခံစိတ်နှင့်ထိရောက်မှုအပေါ်မူတည်ပါသည်။ အဆိုပါသောက်သုံးသောပင်တစ်နေ့လျှင် 10mgs ၏နိမ့်ဆုံးသောက်သုံးသောယူပြီးပြီးနောက်အဆင့်မြင့်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကိုခံစားရသူကိုအသုံးပြုသူများအတွက်ထပ်မံလျှော့ချနိုင်ပါတယ်။
နေ့စဉ် tadalafil အမှုန့်သုံးစွဲမှုကိုများအတွက်ကနဦးပါးစပ်ထိုးတစ်ချိန်ကတစ်နေ့လျှင် 2.5mg နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုအချိန်ကိုက်ထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းမရှိဘဲ, နေ့တိုင်းတစ်ချိန်တည်းယူရပါမည်။ ဤသည်သောက်သုံးသောလိင်တစ်ပတ်ကိုသုံးသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုကြိမ်ရှိသည်ဖို့ချင်ပါတယ်တဲ့သူအသုံးပြုသူများအတွက်ကိုဖန်ဆင်းသည်။ ဤတွင်အဆိုပါပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုသောက်သုံးသော 2.5 ထံမှတစ်နေ့လျှင် 5mgs ဖို့နေကြပါတယ်နှင့်နှုတ်တစ်ကြိမ် 24 နာရီကိုယူရပါမည်။
ညင်သာပျော့ပျောင်းဆီးကျိတ် hyperplasia (BPH) အတွက် Tadalafil အမှုန့်သောက်သုံးသောနှင့် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု (ED)
သငျသညျကိုလညျးအသုံးပြုသူများအတွက်ကောင်းသောသတင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်သောတစ်ချိန်ကမှာအခြေအနေနှစ်ခုဆက်ဆံဖို့ tadalafil ယူနိုင်ပါတယ်။ ED နှင့်ဆီးကြိတ်ကြီးခြင်းရဲ့အောင်မြင်တဲ့ကုသမှုများအတွက်အကြံပြုထားတဲ့သောက်သုံးသောတစ်ချိန်တည်းမှာနှုတ်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်ယူရပါမည်သည့်နေ့စဉ်သောက်သုံးသော, 5mg ဖြစ်ပါတယ်။ ဤတွင်, သင်သည်သင်၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအချိန်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်မလိုပါပေမယ့်တပ်မက်လိုချင်သောရလာဒ်များအောင်မြင်ရန်ဖို့သောက်သုံးသောညွှန်ကြားချက်မှကပ်။ သင့်ဆရာဝန်ကသင်၏ဆေးဝါးတိုးတက်မှုကိုစောင့်ကြည့်ပြီးနောက်ရပ်တန့်ဖို့သငျသညျအကွံပေးမှီတိုင်အောင်, သင်၏သောက်သုံးသောယူပါ။
အဆုတ်သွေးတိုး၏အောင်မြင်သောကုသမှုများအတွက်, သငျသညျတခါတစ်နေ့လျှင် tadalafil အမှုန့် 40mgs ယူရပါလိမ့်မယ်။ သငျသညျတစျနေ့အတွက် 40mgs သောက်သုံးသောကိုဝေဖို့ဒါမှမဟုတ်ပင်ဆေးထိုးတိုးမြှင့သို့မဟုတ်လျှော့ချဖို့ထင်မထားပေ။
ညင်သာပျော့ပျောင်းဆီးကျိတ် hyperplasia ဘို့အရွယ်ရောက်ပြီးသူ tadalafil သောက်သုံးသော
ဆီးကြိတ်ကြီးခြင်းရဲ့ကုသမှုများအတွက်, သငျသညျတခါတစ်နေ့လျှင် 5mgs ပါးစပ် tadalafil သောက်သုံးသော ယူ. သင့်အကြောင်း 26 ပတ်နေ့တိုင်းနီးပါးတစ်ချိန်တည်းယူသေချာအောင်သင့်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ဆရာဝန်လည်းသင့်ခန္ဓာကိုယ်ကပထမရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်များအတွက်ဆေးညွှန်းတုံ့ပြန်မှုကိုဘယ်လိုပေါ် မူတည်. နေ့စဉ်သောက်သုံးသောတိုးမြှင့သို့မဟုတ်လျှော့ချနိုင်ပါတယ်။ အခြေအနေကပိုဆိုးရရှိသွားတဲ့မတိုင်မီမည်သည့်အဆင့်မြင့်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး၏အမှု၌အစဉ်အမြဲအချိန်အတွက်သင့်ဆရာဝန်ကိုဆက်သွယ်ပါ။
Tadalafil အမှုန့် ဘဝတစ်ဝက် သင့်ရဲ့သောက်သုံးသောယူပြီးပြီးနောက်အကြောင်းကို 36 နာရီအဘို့သင့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲတွင်တက်ကြွစွာရှိနေမည်။ ဒါကသူတို့ရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံကတိုးတက်လာဖို့ရှာဖွေနေအများအပြားအသုံးပြုသူများအတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှု tadalafil စေသည်။ နေ့စဉ် tadalafil အမှုန့်ထိုးတာကိုသင်ပထမဦးဆုံးအသုံးပြုမှုလောက်သုံးမှငါးရက်အတွင်းများအတွက်သောက်သုံးသောယူပြီးပြီးနောက်နူးညံခြင်းနှင့်ကြာကြာစိုက်ထူမှီကူညီပေးပါမည်။ On-demand မြင့်သောဆေးညွှန်းကိုကောင်းစွာတုန့်ပြန်မလူတို့သညျအဘို့, tadalafil နေ့စဉ်သောက်သုံးသောယူပြီးအလွန်အသုံးဝင်ပါလိမ့်မယ်။ နေ့စဉ်ဆေးညွှန်းကသင်၏လိင် drive ကိုနီးပါးသိသိသာသာတိုးတက်မှုများကိုစံပြဖြစ်ကြသည်။
ဒါဟာသင်တစ်နေ့လျှင်တစ်ကြိမ်သာ tadalafil အမှုန့်သောက်သုံးသော ယူ. သင်ရလဒ်များ 24 နာရီအတွင်းအခြားသောက်သုံးသောယူပါဘူးမရကြဘူးလျှင်အစဉ်အမြဲအကြံပြုလိုတယ်ပါပဲ။ Tadalafil အမှုန့်ရလဒ်တွေကိုအချို့သောအသုံးပြုသူများအတွက်နှောင့်နှေးစေခြင်းငှါ, ဒါပေမယ့်သင်ကထိုနေ့အတွင်းတစ်ဦးအပိုဆောင်းထိုးယူသင့်ကြောင်းမဆိုလိုပါ။ ပထမဦးစွာအချိန် tadalafil အမှုန့်သည်အသုံးပြုသူများအချို့နှောင့်နှေးတွေ့ကြုံခံစားစေခြင်းငှါ, ဒါပေမယ့်အချိန်နှင့်အတူသူတို့လိုချင်သောစိုက်ထူမှီ။
tadalafil အမှုန့်သလောက်အလွဲသုံးစားသို့မဟုတ် overdosed လျှင်အချို့သောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးရန်သင့်အားဖော်ထုတ်နိုင်, ကွဲပြားခြားနားသောကျန်းမာရေးအခြေအနေများကုသတစ်ဦးချင်းစီကူညီပေးနေထားပြီးတဲ့အစွမ်းထက်မူးယစ်ဆေးဖြစ်ပါတယ်။ ၏အများစု tadalafil အမှုန့်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေ အလွဲသုံးစားလုပ်မှုကြောင့်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်မည်သို့သင့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မူးယစ်ဆေးတုံ့ပြန်မှု။ အများအားဖြင့်, လူအခြို့ကိုတောင်လက်ျာသောက်သုံးသောယူပြီးပြီးနောက်မူးယစ်ဆေးဝါးရဲ့အကျိုးကျေးဇူးများကိုခံစားရန်ပျက်ကွက်ပါလိမ့်မယ်။ အချို့သောအသုံးပြုသူများကိုလည်းအခြားသူတွေထက်နည်းပါးလာဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကိုခံစားရပေမည်။ တချို့ကဘုံ tadalafil ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအချိန်နှင့်အတူပျောက်ကွယ်သွားစေခြင်းငှါ, အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းသူတို့မူကား,
သင့်ရဲ့ tadalafil အမှုန့်ကိုယူပြီးနေစဉ်ခေါင်းကိုက်အလွန်ဘုံဖြစ်ကြသည်။ သင်တို့သည်လည်းရင်ပူ, ရင်, ပျို့, flushing, ဝမ်းလျှောခြင်း, ချောင်းဆိုးတွေ့ကြုံခံစားပေလိမ့်မည်။ သင်၏ကျောထဲမှာဝဒေနာ, အစာအိမ်, ခြေထောက်, ဒါမှမဟုတ်လက်နက်လည်းအများအပြား tadalafil အသုံးပြုသူများအတွက်အလွန်ဘုံဖြစ်ကြသည်။ ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း, သင်အဖြေတစ်ခုရဖို့ကူညီရန်သင့်ဆရာဝန်အကြောင်းကြားသည်ဤဆိုးကျိုးများခဏအကြာတွင်ပျောက်ကွယ်သွားသင့်တယ်, ဒါပေမယ့်အမှု၌သူတို့မျှော်မှန်းထားသည်ထက်ပိုရှည်နေပါ။ ကောင်းမွန်သောသတင်းနီးပါးသမျှသောဤ tadalafil ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးထိန်းချုပ်ထားနိုင်ဖြစ်ပါတယ်။
သငျသညျခကျြခငျြးသငျသညျသူတို့ကိုကြုံနေရ start, သူတို့ပါဝင်သည်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအာရုံကိုရှာခြင်းငှါသင့်ကြောင်းအချို့ပြင်းထန်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးလည်းရှိပါတယ်;
ရူပါရုံကိုသို့မဟုတ်မှုန်ဝါးဗျာဒိတ်ရူပါရုံဆုံးရှုံးမှု tadalafil ယူပြီးအခါ။ အချို့သောအသုံးပြုသူများသူတို့ကဒီမူးယစ်ဆေးကိုယူပြီးစတင်တစ်ချိန်ကသူတို့ရဲ့ရူပါရုံ၌အခက်အခဲများကြုံနေရ start, ထိုသို့ဖြစ်ပျက်တခါ, ဖြစ်နိုင်သမျှအတိုဆုံးအချိန်အတွင်းမှာသင့်ဆရာဝန်ကိုခေါ်ပါလိမ့်မယ်။
အရောင်ရူပါရုံကိုမဆိုအပြောင်းအလဲများကိုလည်းအနီးဆုံးဆေးဘက်ဆိုင်ရာအဆောက်အသို့မဟုတ်သင့်အကြံအဥာဏ်မှချက်ချင်းသတင်းပို့ရပါမည်။ အချို့သောအသုံးပြုသူများသည်ထိုကဲ့သို့သောအစိမ်းရောင်နဲ့အပြာရောင်အကြားကွာခြားချက်ပြန်ပြောသည်ကဲ့သို့အချို့အရောင်များ, ဖော်ထုတ်အတွက်အခက်အခဲများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပေလိမ့်မည်။
, ပြဿနာများကိုကြားနာနား၌အူ, ဆုံးရှုံးမှုများနှင့်အကြားအာရုံ၏ကျဆင်းခြင်းလည်းတဦးတည်းကိုတွေ့ကြုံခံစားအံ့သောငှါအခြားပြင်းထန်သောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဖြစ်ပါသည်။
ရင်ဘတ်ဝေဒနာနှင့်မူးဝြေခင်း, အရေပြားကွာသို့မဟုတ်ကျဲကျဲ, အဖု, လျှာ, မျက်စိ, နှုတ်ခမ်းနှင့်မျက်နှာရောင်ရမ်းခြင်း။
အထက်ပါ-အဆင့်မြင့်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးနှင့် ပတ်သက်. သင်၏ဆရာဝန်အကြောင်းကြားရန်ပျက်ကွက်နောက်ကြောင်းပြန်မလှည်အခြေအနေများသို့ဦးတည်နိုင်ပြီးတစ်ခါတစ်ရံတွင်အသေခံဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြပေးနိုင်သည်။ သင်သက်ရောက်မှုမဆိုတွေ့ကြုံခံစားလျှင်ဆေးပညာဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များကိုဆက်သွယ်မှတွန့်ဆုတ်မနေပါနဲ့။ ထိုနည်းတူစွာပင်ပိုရောဂါများဆီသို့ဦးတည်သို့မဟုတ်သင့်အခွအေနေပိုဆိုးလာလိမ့်မယ်အဖြစ်သင်၏ဆေးဝါးအသိပေးစရာမလိုဘဲသောက်သုံးသောနှင့်အတူဆက်လက်ပါဘူး။ လူအားလုံးတို့သည် tadalafil ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး Control ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, သင်၏ဆရာဝန်သင့်အခြေအနေဆန်းစစ်ပြီးနောက်အညီသင်အကြံပေးပါလိမ့်မယ်။
8.ရောင်းရန် Tadalafil အမှုန့်
Tadalafil အမှုန့် ရောင်းမည် စျေးကွက်အပေါ်ဖြစ်စေအွန်လိုင်းစတိုးဆိုင်များသို့မဟုတ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆေးဆိုင်များအတွက်ရရှိနိုင်ပါသည်။ သို့သျောလညျး, သင်သည်သင်၏တည်နေရာပေါ် မူတည်. ထိုကဲ့သို့သော Cialis သို့မဟုတ် Adcirca အဖြစ်ကွဲပြားခြားနားသောအမှတ်တံဆိပ်အမည်များကိုအောက်မှာရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်။ ဤသည်အများအပြားတရားစီရင်မှုအတွက်ဥပဒေရေးရာဆေးညွှန်းမူးယစ်ဆေး, သင်, ပိုင်ဆိုင် purchasing, သို့မဟုတ်မူးယစ်ဆေးတင်သွင်းသည့်အခါမဆိုစိုးရိမ်မှုတွေရှိသည်မဟုတ်သငျ့သညျ။ အမေရိက၏အမရေိကနျပွညျထောငျစုတှငျ Tadalafil ပထမဦးဆုံး erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုကုသရေးတို့အတွက် 2003 အတွက်အတည်ပြုခဲ့ပါသည်, ထိုနှစ်အတွင်းကြောင့်ထိရောက်သောဖြစ်သက်သေပြခဲ့သည်။ အဆိုပါ tadalafil အမှုန့်သင့်ရဲ့အခွအေနေကုသရန်လိုအပ်သည့်ငွေပမာဏပေါ် မူတည်. ကွဲပြားခြားနားသောဂရမ်ထဲမှာရရှိနိုင်ပါသည်။
သငျသညျအခမဲ့များမှာ အမြောက်အများအတွက် tadalafil အမှုန့်ကိုဝယ် သင့်ရဲ့တဦးတည်းတစ်ရက်သို့မဟုတ်ရက်အနည်းငယ်အသုံးပြုမှုသည်သင်၏ဆရာဝန်၏ထောက်ခံချက်ပေါ် မူတည်. သို့မဟုတ်ရုံအလုံအလောက်။ အဲဒီမှာယနေ့စျေးကွက်အပေါ်အများကြီး tadalafil အမှုန့်ပေးသွင်းသော်လည်း, သင်တစ်ဦးဂုဏ်သိက္ခာရှိတဲ့ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ရောင်းချသူထံမှရသေချာပါစေ။ သင်စျေးကွက်အပေါ်ကိုဖြတ်ပြီးလာအားလုံးရောင်းသူအရည်အသွေးမြင့်မူးယစ်ဆေးဝါးများရှိသည်မဟုတ်။ ပိုကောင်းနှင့်အမြန်ရလဒ်များကိုအဘို့, အောက်မေ့ကြလော့ သငျသညျအသှေးကို tadalafil အမှုန့်ရှိသမျှကိုအချိန်အသုံးပြုသင့်ပါတယ်။ အချို့သောအရည်အသွေးတွေကင်းမဲ့စေခြင်းငှါ, နှင့်သင့်အခွအေနေဆက်ဆံဖို့အလုံအလောက်နိုင်စွမ်းမဖြစ်စေခြင်းငှါ, ရာ tadalafil အမှုန့်တစ်ယေဘုယျပုံစံလည်းရှိပါတယ်။
အမှု၌သင်တို့ကိုအရည်အသွေးကို tadalafil အမှုန့်ရရှိရန်ဘယ်မှာသို့မဟုတ်ဘယ်လိုသေချာမသိကြ, ထို့နောက်သင့်ဆရာဝန်ပြောပြရန်မကြောက်ပါဘူး။ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပညာရှင်များဘယ်မှာသူတို့သည်သင့်မှသတ်မှတ်သည့်မူးယစ်ဆေးဝါးများရရန်သင့်အားပြသဖို့အကောင်းဆုံးလူဖြစ်ကြ၏။ သို့ရာတွင်ထိုသို့သင်တို့ပတ်လည်ကိုအကောင်းဆုံး tadalafil အမှုန့်ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများသိရန်သင့်ရဲ့သုတေသနလုပ်ဖို့အမြဲကောင်းပါတယ်။ သငျသညျကလွယ်ကူသင်သည်သင်၏သောက်သုံးသောနှင့်အတူဆက်လက်အဖြစ်သင်ကသိမ်းဆည်းထားရန်အဘို့အရာဖြစ်စေမည်ကြောင်းကောင်းစွာ-ထုပ်ပိုး tadalafil အမှုန့်ကိုဝယ်သေချာအောင်လုပ်ပါ။
ကမ္ဘာကြီးကိုပြောင်းလဲနေပါတယ်, နှင့်နောက်ကျောအချို့ရက်ပေါင်းမတူဘဲသင်သည်တတ်နိုင် tadalafil အမှုန့်ကိုဝယ် တတ်နိုင်သမျှအတိုဆုံးအချိန်အတွင်းမှာသင့်ရဲ့ထုတ်ကုန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ website တွင်အွန်လိုင်းနှင့်ရ။ သင်သည်သင်၏စမတ်ဖုန်း, တက်ဘလက်, ဒါမှမဟုတ်လက်ပ်တော့တဆင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ site ကိုဝင်ရောက်နှင့်သင်၏အိမ်သို့မဟုတ်ရုံး၏နှစျသိမျ့မှာသင့်ရဲ့အမိန့်ကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ တနည်းအားဖြင့်, သင်ဆဲသင့်ဒေသခံဆေးဆိုင်ကနေ tadalafil အမှုန့်ရနိုင်တယ်။ သို့သော်ကျနော်တို့ကအမြဲတမ်းဖြစ်စေအွန်လိုင်းသို့မဟုတ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုအကောင်းဆုံး tadalafil အမှုန့်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းရှာဖွေနေတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်အလွန်သတိထားပါရန်အကြံပြုသည်။ မူးယစ်ဆေးရောင်းသူအချို့သည်လိုချင်သောရလဒ်များကိုမကယ်မလွှတ်သို့မဟုတ်ပြင်းထန်သောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးရန်သင့်အားဖော်ထုတ်တက်အဆုံးသတ်ရန်ပျက်ကွက်လိမ့်မည်ဟုအရည်အသွေးနိမ့်ထုတ်ကုန်တွေသိုလှောင်ပေလိမ့်မည်။
သင်ကဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာကိုနားလည်မှ tadalafil အမှုန့်ကိုဝယ်ခြင်းငှါအကြောင်းကိုဖြစ်ကြောင်းကုမ္ပဏီနှင့် ပတ်သက်. သင့်ရဲ့သုတေသနပြုလုပ်ပါ။ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကုမ္ပဏီနှုန်းသတ်မှတ်ချက်များနှင့်ဖောက်သည်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းကိုကြည့်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဦးကဂုဏ်သိက္ခာရှိတဲ့ကုမ္ပဏီအပြုသဘောတုံ့ပြန်ချက်များနှင့်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ ratings ရပါလိမ့်မယ်။ ကွဲပြားခြားနားသောဖောက်သည်အတွေ့အကြုံကို Read နှင့်တစ်ဦးအသိပေးဆုံးဖြတ်ချက်ပါစေ။ တစ်ဦးကပျော်ရွှင်ဖောက်သည်အမြဲထောက်ပံ့ဖို့တခြားဖောက်သည်အကြံပြုပါလိမ့်မယ်, နှင့်စိတ်ပျက်သူတွေကိုသူတို့ရဲ့စိတ်ပျက်စရာထုတ်ဖော်ပြောဆိုဖို့မကြောက်ရွံ့ပါလိမ့်မယ်။ tadalafil အမှုန့်ဝယ်ယူသည့်အခါသင်၏အချိန် ယူ. , အလျင်ဖြစ်, နှင့်ပေးသွင်း '' အဖြစ်ဈေးကွက်တွင်ရရှိနိုင်သောထုတ်လုပ်သူလေ့လာမထားပါနဲ့။ သင့်ရဲ့ဆရာဝန်လည်းန်းကျင်ကိုအကောင်းဆုံး tadalafil ရောင်းချသူဖော်ထုတ်၌သင်တို့ကိုကူညီပေးနိုင်ပါသည်။
ကျနော်တို့ဦးဆောင်များမှာ tadalafil အမှုန့်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း ဒေသတွင်း၌၎င်း, ကျွန်တော်ယခုနှစ်ပေါင်းများစွာရှေ့ဂိမ်းခဲ့ကြပြီ။ ငါတို့ရှိသမျှသည်ဖောက်သည်အရည်အသွေးကိုဆေးဘက်ဆိုင်ရာထုတ်ကုန်များပူဇော်အဖြစ်ကမ္ဘာတစ်လွှားအချိန်မီပေးပို့အောင်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အသုံးပြုသူ-ဖော်ရွေက်ဘ်ဆိုဒ်ကိုသင်စက္ကန့်အတွင်းနှင့်ဘယ်နေရာကနေမဆိုသင့်ရဲ့အမိန့်ကိုလုပ်ခွင့်ပြုထားသည်။ သင်အလွယ်တကူကျွန်တော်တို့ရဲ့ website တွင်တယောက်ကိုတယောက်ထုတ်ကုန်ကနေစီမံကိုင်တွယ်နိုင်။ ထိုကဲ့သို့သော tadalafil အမှုန့်အဖြစ်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆေးဘက်ဆိုင်ရာထုတ်ကုန်များ, အကူးအပြောင်းအတွက်မဆိုညစ်ညမ်းမှုစဉ်ကိုရှောင်ကြဉ်ခြင်းနှင့်သင်တို့ကိုလည်းမူးယစ်ဆေးဝါးတွေကိုသိမ်းဆည်းဖို့အဘို့ကလွယ်ကူစေရန်ကောင်းစွာ-ထုပ်ပိုးဖြစ်ကြသည်။ သို့သော်ကျနော်တို့အမြဲတမ်းဆေးစစ်ခံယူနှင့်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပရော်ဖက်ရှင်နယ်နေသငျ့လျြောသောဆေးညွှန်းလာပြီဘဲကျနော်တို့ရဲ့မူးယစ်ဆေးဝါးများကိုယူပြီးစတင်ရန်မဟုတ်, အားလုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့သစ္စာစောင့်သိဖောက်သည်အကြံပြုသည်။
tadalafil အမှုန့်နှင့်ပတ်သက်ပြီးလူအပေါင်းတို့မေးခွန်းများကိုသို့မဟုတ်စိုးရိမ်ပူပန်မှုများအဘို့, သင်သည်မည်သည့်အချိန်ကကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်အခမဲ့ဖြစ်ကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏နိုင်ခဲ့ဖောက်သည်စောင့်ရှောက်မှုစားပွဲခုံခြင်းရှိသမျှကိုဖြေရှင်းပေးရန်နှင့်လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ပလက်ဖောင်းတခုတခုအပေါ်မှာအမိန့်လုပ်သင့်ကိုကူညီလိမ့်မယ်။ ပျောက်ကလေးများမှအမှုန့်တွေကိုသိမ်းဆည်းခြင်းနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ရလဒ်တွေကိုများအတွက်အကြံပြုသောက်သုံးသောယူပါ။ အမှု၌သင်တို့ကိုမဆိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကိုခံစားရပိုအကြံဉာဏ်နှင့်လမ်းညွှန်မှုအဘို့သင့်ဆရာဝန်အကြောင်းကြား။
10 ။Sildenafil citrate အမှုန့် vs Tadalafil အမှုန့်
ထိုသူနှစ်ဦးမူးယစ်ဆေးဝါး phosphodiesterase-5 (PDE5) ကိုပိုင်နှင့်သောသူတို့သည်နီးပါးတူညီလမ်းအတွက်အလုပ်လုပ်ဆိုလိုသည်။ အဆိုပါ tadalafil အမှုန့်နှင့် sildenafil citrate အမှုန့်ဘုံထဲမှာအများကြီးရှိသည်, သူတို့ယောက်ျားအတွက်ခွန်အားမရှိခြင်းနှင့် erectile အလုပ်မဖြစ်ဆက်ဆံဖို့အသုံးပြုကြသည်။ အသုံးပြုသူနှိုးဆော်ခြင်းရရှိသည့်အခါသို့သော်နှစ်ခုမူးယစ်ဆေးဝါးများသာထိရောက်သောနိုင်ပါတယ်။ သင်တို့ရှိသမျှသည်သောက်သုံးသောညွှန်ကြားချက်, tadalafil နှင့် sildenafil citrate အမှုန့်ကိုလိုက်နာတဲ့အခါမှာသငျသညျအခိုငျအမာနှင့်အချိန်ကြာမြင့်စွာစိုက်ထူမှီကူညီပေးနိုင်ပါသည်။
စွမ်းဆောင်ရည်၏စည်းကမ်းချက်များ၌, tadalafil အမှုန့်သင့်ရဲ့သောက်သုံးသောယူပြီးပြီးနောက်မိနစ် 16 မှ 45 အတွင်းအလုပ်လုပ်ပါတယ်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, sildenafil 30 မိနစ်အတွင်းရလဒ်များကိုကယ်တင်တတ်၏, သင်တစ်ဦးက high-အဆီမုန့်ညက်ကိုလည်း ယူ. အခါ, ကမူးယစ်ဆေးရဲ့ထိရောက်မှုကိုထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်, sildenafil citrate အမှုန့်ပိုကောင်းတဲ့ရလဒ်အတွက်တစ်ဦးအချည်းနှီးသောအစာအိမ်အပေါ်ယူသင့်ပါတယ်။ အားလုံးနီးပါး PDE5 ထိရောက်မှုဆင်တူသည် inhibitors ။ သို့သော် 84% မှာ 81% နှင့် tadalafil မှာရပ်နေ sildenafil ထိရောက်မှုရှိနေသော်လည်း, များစွာသောလူတို့သညျကတစ်ဦးထက်ပိုကြာရှည်ကြာချိန်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ tadalafil အမှုန့်ကိုယူပြီးကြိုက်တတ်တဲ့။
နေ့စဉ်လိုအပ်သို့မဟုတ်သည့်အခါ Tadalafil အမှုန့်ကိုယူနိုင်ပါသည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်, ထို tadalafil နေ့စဉ်ဆေးညွှန်းလိုအပ်သောအခါ, ဆေးထိုးခြင်းထက်သေးငယ်ကြသည်။ ဥပမာ, 10mgs လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုရှေ့တော်၌ထို စတင်. tadalafil သောက်သုံးသောဖြစ်ပါတယ်။ ယူပြီးတာနဲ့သက်ရောက်မှုနှင့် ပတ်သက်. 36 နာရီကြာရှည်ပါလိမ့်မယ်။ သင့်ရဲ့ဆရာဝန်လည်း 20mg ဖို့သောက်သုံးသောတိုးမြှင့်ခြင်းသို့မဟုတ်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးသည်းမခံနိုင်သောအခါ 5mg ကကိုလျှော့ချနိုင်ပါတယ်။ ဆီးကြိတ်ကြီးခြင်းရဲ့ကုသတဲ့အခါမှာနေ့စဉ်သောက်သုံးသောအဘို့, အကြံပြု tadalafil အမှုန့်သောက်သုံးသော ED နှင့် 2.5mg များအတွက် 50mg ဖြစ်ပါတယ်။ အသုံးပြုသူများလည်းဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေကိုလျှော့ချရန်ဆရာဝန်၏အကြံပေးချက်ကိုမပါဘဲ tadalafil သောက်သုံးသောတိုးမြှင့်ဖို့မအကြံပြုပါသည်။
သငျသညျလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုအတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုထိတွေ့ဆက်ဆံမတိုင်မီ Sildenafil citrate အမှုန့်ကိုတစ်ကြိမ်နေ့နှင့်တစ်နာရီနှုန်းကိုယူရပါမည်။ အဆိုပါမူးယစ်ဆေးတစ်ခုလိုအပ်အခြေခံပေါ်မှာယူရပါမည်, နှင့်အကြံပြုထိုးသင်တို့သည်လည်း 50 မိနစ်ယူသို့မဟုတ်လေးနာရီလိင်မတိုင်မီနိုင်သည့် 30mgs ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ 100mg သောက်သုံးသောလိုချင်သောရလဒ်များကိုကယ်နှုတ်တော်မူသော်လည်းမအောင်မြင်လျှင်အချို့ကိစ္စများတွင်, sildenafil citrate အမှုန့်သောက်သုံးသော 50mgs မှတိုးမြှင့်စေနိုင်သည်။ သငျသညျသည်းမခံနိုင်သောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကိုခံစားရလျှင်သင်၏ဆရာဝန်လည်း 25mgs ဖို့သောက်သုံးသောလျှော့ချနိုင်ပါတယ်။ ရုံ tadalafil ကဲ့သို့ sildenafil citrate အမှုန့်ကိုသင်4နာရီအတွင်းရလဒ်ကိုမရကြဘူးလျှင်ပင်တစ်နေ့လျှင်တစ်ကြိမ်သာယူရပါမည်။
အဆိုပါနှစ်ဦးကိုမူးယစ်ဆေးဝါး, overdosed သို့မဟုတ်အလွဲသုံးစားအခါ, ထိုကဲ့သို့သောဖလပ်, ခေါင်းကိုက်ခြင်း, ရင်အဖြစ်နီးပါးဆင်တူဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်။ သို့သော်အရောင်အမြင်ကပို sildenafil citrate အမှုန့်နှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ သတငျးကောငျးကိုသင်ချက်ချင်းဆေးကုသရှာလျှင်အားလုံးနှစ်ခုမူးယစ်ဆေးရဲ့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးထိန်းချုပ်ထားနိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ ယင်းနှင့် ပတ်သက်. ပိုမိုသိရှိလိုပါကအဘို့သင့်ဆရာဝန်သို့မဟုတ်ဆေးဝါးတိုင်ပင်ဆွေးနွေးဖို့အခမဲ့ခံစားရ tadalafil အမှုန့်နှင့် sildenafil citrate အမှုန့်.
Kukreja, RC, Salloum, FN, Das, အေ, Koka, အက်စ်, Ockaili, RA, & ရှီ, အယ်လ် (2011) ။ နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာရောဂါများကိုအတွက် phosphodiesterase-5 inhibitors သစ်အသုံးပြုမှုထွန်းသစ်စ။ စမ်းသပ် & လက်တွေ့နှလုံးရောဂါ, 16(4), e30 ။
Mostafa, ME, Senbel, Am, & Mostafa, တီ (2013) ။ ဆီးချိုကြွက်များတွင် penile လိုဏ်ဂူတစ်ရှူးအပေါ်နာတာရှည်အနိမ့်ထိုး tadalafil ၏အကျိုးသက်ရောက်မှု။ Urology, 81(6), 1253-1260 ။
Kaya, ခ, Çerkez, C တို့, Işılgan, SE, Göktürk, အိပ်ချ်, Yığman, Z. , Serel, အက်စ်, ... & Ergün, အိပ်ချ် (2015) ။ ကြွက်များတွင်အရေပြားခတ်ရှင်သန်မှုအပေါ်စနစ်တကျ sildenafil, tadalafil နှင့် vardenafil ကုသမှု၏သက်ရောက်မှုများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်။ ပလပ်စတစ်ခွဲစိတ်မှုနှင့်လက်ခွဲစိတ်ကုသ၏ဂျာနယ်, 49(6), 358-362 ။
Porst, အိပ်ချ်, Roehrborn, CG, Secrest, RJ, Esler, အေ, & Viktrup, အယ်လ် (2013) ။ လေးကျပန်း, ရလဒ်များအရအိပ်ယာ-controlled tadalafil လက်တွေ့လေ့လာမှုများကနေထို့နောက်ပါတီအသီးသီးမှအချက်အလက်များ၏ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်း: ညင်သာပျော့ပျောင်းဆီးကျိတ် hyperplasia ရန်နှင့်နှစ်ဦးစလုံးအခြေအနေများနှင့်အတူလိင်ကတက်ကြွစွာယောက်ျားအတွက် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုအပေါ်အလယ်တန်းအောက်ပိုင်းဆီးကျေးရွာအုပ်စုလက္ခဏာတွေပေါ် tadalafil ၏ဆိုးကျိုးများ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆေးပညာဂျာနယ်တွင်, 10(8), 2044-2052 ။